Imaaraadka oo saldhig ciidan oo la fahmi la’yahay Gobolka ka dhisaya + Sawirro Dayax-gacmeed | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Imaaraadka oo saldhig ciidan oo la fahmi la’yahay Gobolka ka dhisaya +...
Imaaraadka oo saldhig ciidan oo la fahmi la’yahay Gobolka ka dhisaya + Sawirro Dayax-gacmeed
(Abuu Dabeey) 26 Maajo 2021 – Imaaraadka ayaa saldhig ujeedkiisa la fahmi la’yahay ka dhisaya jasiirad istaraatiji ah oo bartamaha uga taalla marinka mashquulka badan ee Baabul Mandab oo muhim u ah qulqulka tamarta caalamka.
Horraantii sanadkan ayay markii ugu horreeysey sawirrada dayax-gacmeedku waxay qabteen dhismaha saldhiggan oo laga samaynayo jasiirad foolkaane keen ah oo la yiraahdo Mayun Island, (sidoo kalena loo yaqaan Perim Island) taasoo aan haatan dalna sheeganin, waloow mararka qaar Yaman la raaciyo.
Saraakiil ka tirsan Dowladda la aqoonsan yahay ee Yaman ayaa sheegay in Imaaraadku uu sidoo kale howlo ka wado jasaa’irka Suqadra, iyadoo sida lagu qoray Socotra Post ay 2 Xildhibaan oo Yamani ihi ay arrintan kala hadleen RW Moeen Abdulmalik.
Tiiyoo ay Imaaraadku 2019-kii ay ka bexeen Magaalo Maarsada Koonfureed ee Cadan, misna saamayntooda waxay u rareen dhinac kale oo gobollada koonfureed ah, kuwaasoo ay ku jiro Suqadra oo ka go’an dalka intiisa kale.
Imaaraadka ayaa Israel la wada qorshe saldhig basaas looga samaynayo Suqadra kaddib markii ay xiriir la yeesheen. Israel ayaa tan iyo 1973-kii xiisaynaysey Marinka Baabul Mandab oo ay xilligaa ka go’doomisey Masar oo xirtey maraakiibtii iyo badeecadii u tallaabaysey Israel ee maraysey halkaasi.
Previous articleWAA CUSUB: ”Waxaan samaysanaynaa dayuurado ku shaqeeynaya ”Caqli Macmal ah!” – MW Erdoğan oo sheegay waqtiga
Next articleJadwalka khudbooyinka xiritaanka Shirka Teendhada Afisyooni (Mid lagu kari waayey madaxda)